Imandarmedia.com.np: म २७ बर्षिया महिला मेरो श्रीमानको यौन शक्ति कम छ, के गर्ने होला ?
Lifestyle » म २७ बर्षिया महिला मेरो श्रीमानको यौन शक्ति कम छ, के गर्ने होला ?
यसका लागि उपर्युक्त उपाय के हुन सक्छ ? यौनसम्पर्क सामान्यतः कति अवधिको हुन्छ ?
यौनसन्तुष्टिलाई पोजिसनले फरक पार्छ कि ? गर्भवती महिलाले यौनसम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुदैन ? हुन्छ भने कुन पोजिसनमा गर्न सकिन्छ ?
प्रायः सबैजसो पुरुषले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै बेला वीर्य स्खलन चाँडो भएको अनुभव गरेका हुन्छन् ।
घर्षण नै गर्न नपाई योनिमा छिराउनासाथ वा छिराउनुभन्दा अघि नै वीर्य स्खलन हुने समस्या पुरुषहरूमा देखिने यौनसम्बन्धी समस्यामध्ये सबैभन्दा बढी पाइने समस्या हो ।
सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा वीर्य स्खलन चाँडो हुनु नै शीघ्र स्खलन हो । तपाइले पत्रमा उल्लेख गर्नुभएअनुसार निरन्तर शीघ्र स्खलनको समस्या छ र तपाईंको यौनसन्तुष्टि प्राप्तिमै नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
विरलै भए पनि केही समस्याको कारण त होइन भनेर केलाउन पनि बिर्सनु हुँदैन । आक्कल-झुकक्ल यस्तो शीघ्र स्लखन हुँदा चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन । अनावश्यक रूपमा चिन्ता गरे झनै समस्या बढाउँछ । शीघ्र स्खलनको समस्या नियमित रूपमा हुन थाल्यो भने पक्कै तपाईंले समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
यौनसम्पर्क रोक्ने-सुरु गर्ने : यौनसम्पर्क गरिरहँदा स्खलन होला जस्तो भएपछि तुरुन्तै लिङ्ग योनिबाट बाहिर झिकेर केही वेर यौनक्रीडालाई नै रोक्ने र यौन उत्तेजना केही कम भएपछि पुनः यौनक्रीडा सुरु गर्ने ।
आशन परिवर्तन गर्ने: लोग्नेमान्छे माथितिर र महिला तलको सट्टा महिला माथितिर बसेर सक्रिय भै यौन सम्पर्क गरे पनि शीघ्र स्खलनलाई कम गर्न मद्दत पुग्छ ।
वीर्य स्खलनलाई राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न सक्छु जस्तो लागेपछि आफ्नी श्रीमती-यौनसाथी सँग यौन सम्पर्करहित यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुने तर यौन सम्पर्क भने नगर्ने । वीर्य स्खलन होला जस्तो भए पनि क्रियाकलाप रोक्ने र उत्तेजना केही कम भएपछि पुनः सुरु गर्ने ।
अब वीर्य स्खलनमा पर्याप्त नियन्त्रण भयो जस्तो लागेपछि लिङ्गलाई बिस्तारै भगक्षेत्र-योनिक्षेत्र) मा स्पर्श वा हल्का घर्षण गर्ने तर यौनसम्पर्क भने नगर्ने । यस्तो गर्दा वीर्य स्खलन होलाजस्तो भए यी क्रियाकलाप गर्न रोक्ने र उत्तेजना केही कम भएपछि पुनः सुरु गर्ने ।
समय र धैर्यता निकै लाग्ने भए पनि वीर्य स्खलन नियन्त्रणमा यो अभ्यास निकै लाभदायक हुनसक्छ र यसमा श्रीमानलाई तपाईंको पर्याप्त सहयोग चाहिन्छ ।